वर्तमान सरकारले यसअघिको सरकारले गरेका गलत कामलाई खारेज गर्नुपर्छः डा.रामशरण महत - दर्पण संसार
वर्तमान सरकारले यसअघिको सरकारले गरेका गलत कामलाई खारेज गर्नुपर्छः डा.रामशरण महत
२०७८ श्रावण २१, बिहीबार १५:१२ बजे
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यथाशक्य चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘सरकारलाई पूर्णता दिनको लागि ढिलाई भयो, सरकार गठन भएको यत्तिका दिन बितिसक्दापनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन, यो गलत कुरा हो । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसँगको सहमतिमा जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ । अब ढिलाई गर्नुहुँदैन् ।’
उनले भने,‘भूमिहिनहरुलाई भूमि दिने कुरामा सरकारले उचित र वैज्ञानिक ढंगले काम गर्छ । तर, यसअघि आयोग बनाएर कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाईएको थियो । यसलाई विघटन गर्नु उचित हो ।’ उनले अब सरकारले उचित व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिने कुरामा जोड दिनुपर्ने पनि सुझाव दिए । त्यस्तै, उनले मुलुकको सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिने विश्वास दिलाए । पूर्वमन्त्री महतले राजनीतिक नियुक्ती गर्दापनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई पूनर्जीवन दिने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि धारणा अघि सारे ।
डा. महतले भदौमै महाधिवेशन हुने सम्भावना लगभग समाप्त भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुँगो नलागेकोले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘साउन १२ गते वडा तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि सकिएन । मुख्य कुरा क्रियाशिल सदस्यता फाईनल हुनुपर्यो नि, अहिलेसम्म भएको छैन् ।’